Omdala uTom Morris: Umbukiso wePaulona weGoli
UTom Morris Sr., owaziwa namhlanje namhlanje njengo-Old Tom Morris, wayenguvulindlela wekhulu le-19 wegalufa kunye nomndilili owandula kwimbali yokuqala yeBritish Open . Ubhekwa njengenye yezinto ezilandelekayo kwiimbali zegalufa .
Umhla wokuzalwa: ngoJuni 16, 1821
Umhla wokufa: ngoMeyi 24, 1908
Isiteketiso: "Umdala uTom," kunjalo. UTom Morris Sr. ubizwa ngokuba ngu "Old Tom" ukuba amhlule kumntwana wakhe, obizwa ngokubhekiselele kwi- Young Tom Morris .
IiNtshontsho ezinkulu kuMqhudelwano
UMorris waphumelela kwiBritish Open ngo-1861, ngo-1862, ngo-1864 kunye ne-1867-yesibini, yesithathu, yesihlanu neyesibhozo amaxesha, ngokulandelanayo, i-Open idlalwe.
I-Biography ye-Old Tom Morris
Umdala uTom Morris mhlawumbi ngumntu onamandla kunayo yonke kwimbali yegalufa. Wayengumdlali omhle, u-clubmaker, umgcini wezolimo kunye nomklami wegalufa.
UMorris wazalelwa eSt. Andrews, eScotland, kwaye ngo-1837, eneminyaka eyi-17 ubudala, wafunda u-Allan Robertson, ejongwa ngabadlali-mlando begalufa ukuba babe ngabaqeqeshi bokuqala begalufu. URobertson wenza iibhola ze-golf ze-featherie , waza wafundisa u-Morris urhwebo. Aba babini bavame ukudibanisa kunye kwimigqomo, kwaye ngokwemigca, abazange batshaywe naliphi na icala. (URobertson wayeyi-golfer yokuqala yokuphula i-80 kwi -Old Course .)
Xa i-gutta percha ibhola yegolfu yafika kwindawo, kodwa ke, le mibini iyahlukana. URobertson wayefuna ukuba uMorris amjoyine ekugwebeni ibhola entsha, ngaloo ndlela ekhusela ishishini lokungcwaba.
UMorris waqaphela i-guttie njengekamva, kwaye washiya icala likaRobertson ngo-1849.
UMorris wasuka eSt. Andrews ukuba ajoyine u-Prestwick, apho wayekhonza khona "njengomgcini weemifino." U-Prestwick wabamba iqela lokuqala laseBrithani ngo-1860, apho uMorris wagqiba okwesibini ukuya kuWillie Park Sr. Kodwa uMorris waqhubeka ekuphumeleleni iiMidlalo eziVulekileyo ezine kule minyaka elishumi.
Ngomnyaka we-1865, wabuyela eSt. Andrews - ukuya kwiikhonkco esiziwayo njenge-Old Course - njengomgcini wezilwanyana-isikhundla sakhe kwaze kwaba ngo-1904-kwaye wasungula ivenkile yokugubha i-club eduze ne-18 eluhlaza. I-18 eluhlaza namhlanje ibizwa ngokuba yi-Old Tom Morris.
UMorris wayenguvulindlela obuninzi kwizinto eziye ziqwalaselwa njengendlela yokuqala yokugcina ukugcina uhlaza. Kwakhona wayengomnye wabalingisi bokuqala bokuqala, uthatha indima ekwakheni okanye ekulungiseni izifundo ezingama-75 ngokubhekiselele kwiHlabathi yeHlabathi yeHlabathi yeGama .
Phakathi kwalabadala i-Tom basinceda ukuba bajonge i-Prestwick, iRoyel Dornoch, i-Muirfield, iCarnoustie , i-Royal County Down, i-Nairn ne-Cruden Bay-yezinye iikholeji ezidumileyo kwihlabathi.
Unyana kaMorris, owathoba iBritish ezine evula, wazalwa ngo-1851. Kodwa u- Young Tom Morris wafa ngomhla weKrisimesi, ngo-1875, nje emva kweenyanga ezimbalwa emva kokuba umfazi wakhe nomntwana bafa ngexesha lokubeletha. Ngethuba lobomi bentombazana kaTom, u-Morris uyise kunye nendodana wayehlala ehlangene kwimingeni yemingeni ngokumelene namanye amaqela, kunye nabadlali abathile bePaki. NjengeMorrisses, uWillie Park Sr. kunye noWillie Park Jr. bobabini be-British Open champs, njengokuba bekuyiMungo Park, umzalwana kaWillie Sr.
UMorris Sr. waphila iminyaka engama-33.
Umdala uTom Morris usabamba ezimbini iirekhodi zaseBrithani ezivulekileyo : ibhola elidala kunabo bonke (iminyaka engama-46 ngo-1867) kunye nomda omkhulu wokunqoba (ama-13 amajoni ngo-1862).
Wadlala kuyo yonke i-British Open kwaze kwaba ngo-1896, iikhohlisi ezingama-36 ezilandelanayo. UMorris akazange afumane umhlala-phantsi njengomgcini wokhuni we-Old Course kude kube ngu-1904, xa eneminyaka eyi-83 ubudala.
IHlabathi yeHlabathi yeHlabathi yeGama ibonisa umdlalo wegalufu kaMorris ngoku: "Wayenomdla ophuzayo, ogqithiseleyo kwaye ukhuphisana ngokugqithiseleyo;
I-golfer yama-Amateur kunye nomlobi uHorace Hutchinson malunga noMorris: "Omnye wamadoda afanelekileyo - angcono amadoda kunye neyona nto ibhetele yegalufa-eyayilahleka i-putt emfutshane. ... Uhlala, kuyo yonke intengiso, ngokufanayo, elula nangomusa. "
I-Golfer Andrew Kirkaldy: "U-Tom omdala wayeyithandwa ngumntu wonke."
I-Old Tom Morris Trivia
Ngomnyaka we-1899, uMdala uTomris uthabatha umqeqeshi wezilwanyana waseSt. Andrews. Lo mfundi wayeyi-Donald Ross, i-genius ye-genius ye-golf.
Ngo-2007, incwadi kaTommy iHloniphe: Ibali le-Old Tom Morris kunye no-Young Tom Morris, uBawo oQalayo weGalofu kunye noNyana (ukuthenga kwi-Amazon), nguKevin Cook, wamphawula i-Herbert Warren Wind Book Award njengencwadi efanelekileyo yegolfu yonyaka. Ngo-2017, le ncwadi yajika yaba yi-movie yegalufu, ebizwa ngokuba yiTommy's Honor .
Ukufundiswa Okucetywayo NgoMdala uTom Morris
Ukuba ufuna ukuhamba ngokubanzi nangobomi kunye nempembelelo yaloovulindlela begalufu, kukho imifanekiso emihle ye-biographies nge-Old Tom. Ukongeza kwi- Tommy's Honored , apha zizinto ezintle ezilungileyo:
UTom Morris we-St Andrews: I-Colossus yeGoli 1821-1908 , eyapapashwa ngo-2012, nguDavid Malcolm noPeter E. Crabtree (bathenge kwi-Amazon)
Umphefumlo we-St. Andrews: Ubomi be-Old Tom Morris , nguWilliam Tulloch (uthenga kwi-Amazon). Epapashwe ngethuba ngexesha lobomi bukaMormis, ngoko-ke ungabonakali kwimbali - kodwa ukhangele indlela uMorris abonwa ngayo esaphila.
I-Golf Course yase-Old Tom Morris: Ukujonga kwi-Early Course Course Architecture , eyapapashwa ngo-1995, nguRobert Kroeger (uthenge kwi-Amazon)
Kukho i- Scrapbook ye-Old Tom Morris (ukuthenga kwi-Amazon), eyaqulunqwa nguDavid Joy, ebonisa iifoto, iileta, iincwadana zamaphephancwadi zamanje kunye nokunye ngobomi bukaMorris.
Ngaba i-snowboarding ikhuselekile kwiindawo zakho zokugwedla kunokudlula i-Skiing?
Khetha Ukuseta Okufanelekileyo Kwimidlalo Yakho
Iimpawu eziziwayo malunga nezobupolitika ezibonisa ukunyaniseka kwezobupolitika